Archive du 20170123
Olana ara-tokantrano Notifiriny ny vadiny, namono tena izy avy eo
Efa tena henjana loatra ve ny fiainana sa ny olona mihitsy no mafana ra ka tsy maintsy mamono rehefa misy ny zavatra tsy itovian-kevitra ? Mpandraharahan�ny fonja iray tokony ho 39 taona no nitifi-tena rehefa avy nitifitra ny vadiny tao Betafo ny alin�ny zoma 20 janoary lasa teo.
PM Solonandrasana Manambitamby Fiangonana
Nafonja ny hafatry ny praiminisitra lehiben�ny governemanta, Mahafaly Olivier Solonandrasana, ho an�ireo kristianina FJKM sy izay rehetra nanotrona ny ivon�ny fankalazana ny faha-150 taona nitokanana ny FJKM tranovato Ambatonakanga omaly.
Seranam-piaramanidina Ivato Fefen�ny tandapa ny tan�na
Miteraka fimenomenonana amin�ireo kaompania tsy miankina sy mpandraharaha miasa eny amin�ny seranam-piaramanidina Ivato ny famefena toerana malalaka amin�ny ilany andrefan�ny faritry ny seranana.
Karama 2017 Miiba 0,1% amin�ny vidim-piainana
Mitentina 85,2 miliara ariary ny bolongambola fanitsiana ny karaman�ny fonksionera voasoratra ao anatin�ny tetibolam-panjakana 2017 taorian�ny fampitomboana ho 7% ny mari-karaman�ny mpiasam-panjakana amin�ity taona 2017 ity
Zafilahy Ying Vah �Tsy avy amin�ny fitrandrahana no mampihantona ny orana�
Tsy misy izay tsy mitaraina ny amin�ny fisian�ireo karazana fitrandrahana amin�ny faritra maro manerana ny Nosy ny ankamaroan�ny olom-pirenena.
Volamena tratra teny Ivato 18 kg mitentina 2,250 miliara Ar
Volamena saika haondrana an-tsokosoko milanja 18 kg mitentina 2,250 miliara ariary no tratran�ny mpiasan�ny fadintseranana teny amin�ny seranam-piaramanidin�Ivato ny sabotsy lasa teo tamin�ny 2 ora maraina.
Fizahantany eto Madagasikara Ratsy endrika noho ny harom-paosy
Nampiditra vola vahiny 702 tapitrisa dolara na 2.246 miliara ariary ny fitombon�ny isan�ireo mpizahatany 20% tonga teto Madagasikara ny taona 2016 mihoatra ny taona 2015, hoy ny minisiteran�ny Fizahantany ny faran�ny herinandro teo.
Stadium Barikadimy-Toamasina Hahazo kianja sentetika
Tany Toamasina nitokana zava-bita telo sosona ny minisitra Rafidimanana Narson minisi-panjakana misahana ny fandaharan�asan�ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana.
DVD sy VCD Adisanina FAN�dio Hivoaka ny talata 31 janoary
Hivoaka ny talata 31 janoary ho avy izao manerana ny Nosy indray ny DVD sy VCD Adisanina FAN�dio, novokarin�ny SCOOP digital.